ပုရိသတို့ရင်ကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားစေမယ့် ကိုယ်လုံးလေးကိုအမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ သံစဉ်မောင်ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ပုရိသတို့ရင်ကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားစေမယ့် ကိုယ်လုံးလေးကိုအမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ သံစဉ်မောင်ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
သံစဉ်မောင် ဟာ ကြော်ငြာ တွေ အပြင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေ ထဲ မှာ လည်း ပါဝင် သရုပ် ဆောင်လာ တာ တွေ့ ရပါ တယ် နော်… ။ သူမ ရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ ချစ်စရာ ပုံရိပ် လေး တွေ ကို လှုမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ် မှာ အမြဲ ဖော်ပြ ပေး တာ ကို တွေ့ရ ပါ တယ် ။ ယခု တစ်ခါမှာ လည်း မြင်သူ တိုင်းငေး မော သွားစေ လောက် မယ့် အမိုက် စား ဖမ်းစားထား တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ် လေး တွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို တင်ပေး လာ ခဲ့ပြန် ပါပြီ နော်…
ဒီပုံလေး တွေ ထဲ မှာတော့ သံစဉ်မောင် ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တရားတွေ ကို အထင်း သား ပေါ်လွင်တဲ့ ဝတ်စုံ လေး ကို ဝတ် ကာ အထာ ကျကျ ပို့စ်ပေးနေ တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒါ့အပြင် ရင်ခုန် စရာ ကောင်း လောက် တဲ့ သူမ ရဲ့ ပင်ကိုယ် အလှ တရား တွေက တော့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ လှရက်လွန်း နေတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ကဲ… ချစ်ပရိသတ် ကြီး ရေ အူယား စရာ ကောင်း လောက် အောင် ပို့စ်ပေး နေ တဲ့ သံစဉ်မောင် ရဲ့ အလှ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ်။
ပရိသတ်ကြီး ရေ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ တွေ အပြင် အပြုံးချိုချို လေး တွေ နဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ အသည်း တွေ ကို ခြွေချ ထား နိုင်သူ က တော့ မော်လ်ဒယ်လ် သရုပ် ဆောင် သံစဉ်မောင် ပဲဖြစ် ပါတယ် ။ သံစဉ်မောင် ဟာ မင်းသမီးချော လေး ဘေဘီမောင် ရဲ့ ညီမတော်စပ် ကာ အမဖြစ်သူ နဲ့အ တူ အနု ပညာ အလုပ် တွေ အတူ တကွ လုပ် ကိုင် နေ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒါ့အပြင် မင်းသမီး ချော သံစဉ်မောင် က စကားပြော ရင် လည်း အေးဆေး တည်ငြိမ် စွာပြော ဆိုတတ်ပြီး စိတ်သဘော ထား ပြည့်ဝ တဲ့ သူလေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .
photo credit : Than Sin Mg
source : Than Sin Mg ’ s Facebook Page
သံစဥ္ေမာင္ ဟာ ေၾကာ္ျငာ ေတြ အျပင္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး ေတြ ထဲ မွာ လည္း ပါဝင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္လာ တာ ေတြ႕ ရပါ တယ္ ေနာ္… ။ သူမ ရဲ့ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြ နဲ႔ ခ်စ္စရာ ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို လႈမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ မွာ အျမဲ ေဖာ္ၿပ ေပး တာ ကို ေတြ႕ရ ပါ တယ္ ။ ယခု တစ္ခါမွာ လည္း ျမင္သူ တိုင္းေငး ေမာ သြားေစ ေလာက္ မယ့္ အမိုက္ စား ဖမ္းစားထား တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ္ ေလး ေတြနဲ႔ ဗီဒီယိုေလး ကို တင္ေပး လာ ခဲ့ျပန္ ပါၿပီ ေနာ္…
ဒီပုံေလး ေတြ ထဲ မွာေတာ့ သံစဥ္ေမာင္ ဟာ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ တရားေတြ ကို အထင္း သား ေပၚလြင္တဲ့ ဝတ္စုံ ေလး ကို ဝတ္ ကာ အထာ က်က် ပို႔စ္ေပးေန တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ရင္ခုန္ စရာ ေကာင္း ေလာက္ တဲ့ သူမ ရဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွ တရား ေတြက ေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ လွရက္လြန္း ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ကဲ… ခ်စ္ပရိသတ္ ႀကီး ေရ အူယား စရာ ေကာင္း ေလာက္ ေအာင္ ပို႔စ္ေပး ေန တဲ့ သံစဥ္ေမာင္ ရဲ့ အလွ ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ ပါ တယ္။
ပရိသတ္ႀကီး ေရ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ ေတြ အျပင္ အျပဳံးခ်ိဳခ်ိဳ ေလး ေတြ နဲ႔ ပုရိသ ေတြရဲ့ အသည္း ေတြ ကို ေႁခြခ် ထား နိုင္သူ က ေတာ့ ေမာ္လ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ သံစဥ္ေမာင္ ပဲျဖစ္ ပါတယ္ ။ သံစဥ္ေမာင္ ဟာ မင္းသမီးေခ်ာ ေလး ေဘဘီေမာင္ ရဲ့ ညီမေတာ္စပ္ ကာ အမျဖစ္သူ နဲ႔အ တူ အႏု ပညာ အလုပ္ ေတြ အတူ တကြ လုပ္ ကိုင္ ေန တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါ့အျပင္ မင္းသမီး ေခ်ာ သံစဥ္ေမာင္ က စကားေျပာ ရင္ လည္း ေအးေဆး တည္ၿငိမ္ စြာေျပာ ဆိုတတ္ၿပီး စိတ္သေဘာ ထား ျပည့္ဝ တဲ့ သူေလး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
Previous post အလွန်တန်ဖိုးထားရတဲ့အရာကို ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်း ရဖို့အတွက် ပေးဆပ်လိုက်ရကြောင်းဖွင့်ဟပြောပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း
Next post အတူနေ(Living Together)ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး များနားလည်အောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောချလိုက်တဲ့ လှနုထွန်း